Izvo Zvemukati Kushambadzira Kuputika | Martech Zone
Iko Kwemukati Kushambadzira Kuputika
Chishanu, February 10, 2012 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Dhipatimendi rekushambadzira nekutengesa rakagara richiita kushambadzira zvemukati… zvaive nyore kwazvo kutengesa zvinhu zvako pawakanga uine zvipupuriro zvevatengi, mapepa evachena, zvidzidzo zvemakesi, maemail uye zvimwe zvinyorwa zvekubatsira kudzidzisa mutengi. Zvino izvo zvirimo inotsvaga uye inogoverwa kuburikidza newebhu, zvakadaro, isu taifanira kuuya nerumwe rudzi rwezita rayo… Content Marketing. Nekuti vatengi vakapiwa simba rekutsvaga iwo ruzivo ivo pachavo, zvemukati kushambadzira kwakakosha nekuti zvemukati zvako zvinofanirwa kuwanikwa mukutsvaga uye mukati memapaneti evaya vari kutsvaga.
Mabhizinesi eese saizi ari kutanga kuona kuti rakasimba sei gwara remukati gadziriso rinofanirwa kuve kune avo ekushambadzira zvirongwa. Kunyangwe makambani makuru seCoca-Cola ari kubheja zvese pane yakasanganiswa yemukati zano. Via iyo posvo neBluegrass
Pamhepo PR Mikana uye Mhedzisiro